Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeer sameeyay:-(Sawiro) – Hareerley News
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku sameeyey Xarunta Tiyaatarka Qaranka, oo xilligaan dhismihiisa uu marayo meel Gebagebo ah.
Kormeerka ayaa Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku wehlinyey Xubno sar sare oo katirsan Wasaaradda Warfaafinta,waxaana uu dhamaan soo marey qeybaha kala duwan ee Tiyaatarka oo uu dhismaha ka socdo.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kul dardaarmey Shaqaalaha iyo Madaxda Xarunta Tiyaatarka inay si wanaagsan loo dhameystiro dhismaha,isla markaana uu noqdo goob Bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in duullaanka uu Turkiga ku qaaday xudday Suuriya uusan ahayn mid lagu qaaday “xudduuddooda”, waxa uuna intaa ku daray in Kurdiyiintu oo xulufo la ahaan jiray mareykanka aysan ahayn “malaa’ig”. Mareykanka ayaa cambaareyn xooggan kala kulmaya tallaabadii uu ciidamadiisa ugala baxay dalka Suuriya, waxaana dadka qaar ay ku doodayaan […]